प्रभावकारी बन्दै आयुर्वेदिक उपचार पद्धति – Puleso
प्रभावकारी बन्दै आयुर्वेदिक उपचार पद्धति
By:puleso Published Date: आइतवार, असार २४, २०७५
महेन्द्रनगर/ होम योगी – नयाँ संघीय संरचना अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आयुर्वेद औषधालय स्थानीय तहमा आएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान हुन थालेको छ् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद औषधालयको सञ्चालनमा लागेको खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार स्थानीय तहमा आएपछि कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आयुर्वेद औषधालयमा रहेका समस्या समाधान भइरहेको छ । महाकाली अञ्चल आयुर्वेद औषधालय भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत आएपछि औषधी अभावको समस्या हटेको औषधालयका आयुर्वेद चिकित्सक डा. सूर्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘पहिला औषधीको अभाव हुन्थ्यो, अहिले आवश्यकता अनुसार औषधी रहेको बताए । भीमदत्त नगरपालिकाले आवश्यक कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गरिदिएको र ‘आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सहज भएको बताए । उनका अनुसार आयुर्वेद औषधालयले भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा योग पञ्चकर्म भवन निमार्ण गर्ने तयारी गरेको छ ।
योग पञ्चकर्म भवन निर्माणका लागि टेण्डर गरेर आगामी साउनमा निर्माण शुरु गरिने र ‘भौतिक संरचनाको अभाव छ, भवन निर्माण भयो भने त्यो समस्या पनि हट्ने बताए । महाकाली अञ्चल आयुर्वेद औषधालयले साउनदेखि बाबाशिर र भगन्धरको आयुर्वेदिक पद्धतिद्धारा उपचार शुरु गर्ने डा. उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार यसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकारण नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने छ ।
औषधालयका प्रमुख डा. उपाध्यायले बाबाशिर र भगन्धरको उपचार महेन्द्रनगरमै शुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका बिरामीलाई सेवा लिन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो सेवा सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक दिन गइरहेका छौं, यसको उपचार शुरु भएपछि सिमा क्षेत्रका भारतीय पनि सेवा लिन आउछन्,’ उनले भने ।
पञ्चकर्म सेवा प्रभावकारी बन्दै
महाकाली अञ्चल आयुर्वेद औषधालय महेन्द्रनगरले पञ्चकर्म र पूर्वकर्म सेवा दिइरहेको छ । औषधालयले सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क पञ्चकर्म आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लोकप्रिय हुँदै गएको छ । पञ्चकर्म र पूर्वकर्म आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिद्धारा बाथ, नसा, हाडजोर्नीको दुखाइ, अनिन्द्रा, टाउको दुखाइ, कम्मर दुखाइ, मानसिक समस्या र डिपे्रसनका बिरामीको उपचार गर्ने गरेको औषधालयका आयुर्वेद चिकित्सक डा. उपाध्यायले बताए ।
उनका अनुसार पञ्चकर्म चिकित्सा अनुसार स्नेहन अन्तर्गत रोगनाशक अश्वगन्धा, तिल, ब्राम्ही तेलको सहायताले बिरामीलाई मालिस गरेर शरीरलाई सुगठित पारी पीडाबाट मुक्ति दिलाएर शरीरलाई स्फुर्ति गराउने कार्य गरिँदै आएको छ । ‘रोगको अवस्थाका आधारमा तेलको छनोट गरी दैनिक १ घन्टाका दरले ७ देखि १४ दिनसम्म यो पद्धतिबाट उपचार गरिन्छ,’ उनले भने ।
स्नेहन पछि रोगीलाई नाडी स्वेदन अन्र्तगत रबर पाइपको प्रयोग गरी औषधिको द्रव्ययुक्त वाष्पलाई शरीरका विभिन्न आवश्यक अंगमा पु¥याउने गरिन्छ । औषध द्रव्य र जललाई नाडी स्वेदयन्त्रमा राखी आगोमा उमालेपछि निस्कने वाष्प स्वेदन यन्त्रमा बिरामीको टाउको बाहिर राखी मुनिबाट औषधियुक्त वाष्प प्रवेश गराई उपचार गरिँदै आएको औषधालयका आयुर्वेद चिकित्सक डा. उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार यस विधिको प्रयोग गर्ने रोगीको संख्या दैनिक १५÷२० जना औषधालय आउँछन् ।
यससँगै शिरोवस्ती, ग्रीवावस्ती, कटीवस्ती, जानवस्ती, चक्षुवस्तीलगायत उपचार पद्धतिबाट समेत औषधालयमा उपचार गरिँदै आएको डा. उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार टाउकाको सम्पूर्ण रोगका लागि शिरोधारा उपयु्क्त औषधालयले आयुर्वेदीय पञ्चकर्म पद्धतिअन्तर्गत महत्वपूर्ण शिरोधारा उपचार विधि पनि सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत लगातार निश्चित उचाइबाट औषधयुक्त तेल निरन्तर रुपमा निधारको बीचमा धारा दिई उपचार गरिन्छ । शिरोधारा लगातार एउटै बिन्दु, दायाँदेखि बायाँ गरेर वा गोलोकार रुपमा दिइने गरिन्छ ।
औषधालयका आयुर्वेद चिकित्सक डा. उपाध्यायका अनुसार औषधालयले श्वासप्रश्वास, ज्वरो, चर्मरोग, ग्यास्ट्रिक र पेटसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचार र आयुर्वेदीक औषधि निःशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । महाकाली अञ्चल आयुर्वेद औषधालय विसं २०४३ सालमा स्थापना भएको हो ।